Ubuntu Phone dia ho hita amin'ny 21 Febroary | Avy amin'ny Linux
Andro vitsivitsy taorian'ny fanambarana ny Ubuntu Phone ny tombantombana dia natomboka tamin'ny daty namoahana ity rafitra miasa ity. Ny zava-drehetra dia nanondro izay ho faran'ny volana feb rehefa afaka misintona an'ity rafitra ity any amin'ny tobiny ireo mpampiasa, ary amin'ny farany dia voamarina fa ho tonga amin'ireo daty ireo.
Faly ny maro fa tsy ho an'ny Galaxy Nexus ihany io terminal io izay naseho tamin'ny fampisehoana. Ho azo apetraka ihany koa amin'ny Nexus 4. Ny daty voafidy dia 21 febroary, avy eo havoaka ireo mpiorina miaraka amin'ny kaody loharano sy fitaovana hampivelarana ny rindranasa.
Ny tanjon'i Canonical dia ny hanome tontolo iainana sahaza an'ireo mpamorona liana hamorona rindranasa ary hamita izany ny fivarotana rindrambaiko rehefa apetraka eny amin'ny tsena ireo toeram-pivarotana. Ny tanjona faratampony dia ny hahazoana antoka fa rehefa novolavolaina ny rindrambaiko ho an'ny Ubuntu 13.10 dia afaka miasa amin'ny solosaina, amin'ny telefaona na amin'ny fahitalavitra izy, nefa tsy mila mampifanaraka izany. Hevitra fatra-paniry laza izay tsy maintsy hiandrasantsika raha afaka manaloka ny Android izy io.
Loharano: Canonical & Xatakandroid
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ubuntu Phone dia ho hita amin'ny 21 Febroary
angalmeida dia hoy izy:
Heveriko fa ho azo ampiasaina amin'ny LG Optimux 2X ihany koa, toa ny nolazain'i neyson, satria navoaka volana lasa izay ny kaody loharano.
Andao hojerentsika raha afaka mametraka zavatra amin'ity finday ity aho izay mahatonga azy tsy hahatratra ny 2 × 3. Nasainy nendasina aho.
Mamaly an'i angalmeida
neyson dia hoy izy:
Heveriko fa hiasa amin'ny sony xperia z ihany koa izy io satria navoakan'izy ireo ny kaody loharano an'ny kernel azon'izy ireo
Mamaly an'i neyson
Izaho dia iray amin'ireo maro miandry ny rafitra fandidiana hampiasana ity Android ity miaraka amin'ilay milina virtoaly java miadana mahatsikaiky, manantena aho fa malalaka be ny fiparitahan'ny fitaovana ary tsy mangataka loharano be dia be izy.
Diksionera Geek, teny vitsivitsy izay ampiasaina amin'ny Internet ary tsy azontsika